Ahoana ny fampiasana VPN amin'ny Mac
Mila mampiasa VPN amin'ny Mac ve ianao? Jereo ny fomba mora indrindra sy haingana indrindra hijerenao soa aman-tsara sy tsy miankina amin'ny solo-sainao Apple.
Parcel, ny fampiharana tsara indrindra hanarahana ny fandefasana anao amin'ny fotoana rehetra
Parcel dia iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra azo jerena ao amin'ny Mac App Store hanarahana ny fonosana rehetra andrasantsika horaisina.
ClassicWeather HD dia mamela antsika hahafantatra ny toetr'andro nohavaozina amin'ny fotoana rehetra
Noho ny fampiharana ClassicWeather HD dia afaka mahafantatra tsy ny toetr'andro ihany isika, fa ny faminaniana ihany koa amin'ny andro vitsivitsy
Ny Story Planner for Writers for Mac dia nohavaozina ary mihena ny vidiny
Story Planner for Writers, iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra ho an'ny mpanoratra, izay vao nohavaozina niaraka tamin'ny fidinan'ny vidiny
QuickKey, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny rindranasa QuickKey dia ahafahantsika manoratra lahatsoratra lava, eny na dia ny fehintsoratra aza, amin'ny alàlan'ny fanafohezana ary miharo amin'ny iCloud koa izy io.
Avadiho amin'ny tabilao PDF ho Excel ity latabatrao ity
Noho ny fampiharana PDF Converter Excel dia afaka manova haingana ny sary na ny fisie PDF ho latabatra ho an'ny fanovana ao amin'ny Microsoft Excel izahay
Ny HEIC Converter dia mamela antsika hanova ireo sary HEIC ho JPG na PNG
Noho ny fampiharana HEIC Converter, afaka mamadika sary avy amin'ny endrika HEIC ho JPG na PNG haingana sy mora isika, na dia amboaram-paritra aza.
Pixelmator Pro izao dia mamela antsika hampitombo ny haben'ny sary kely nefa tsy hanary kalitao
Ny fampiharana Pixelmator Pro dia nanisy fiasa vaovao ahafahantsika manitatra sary nefa tsy very antsipirihany.
Fanavaozana ny Affinity Photo ho an'ny endri-javatra Sidecar
Vao avy nohavaozina ny Affinity Photo ary manohana tanteraka ny endri-javatra Sidecar napetrak'i Apple amin'ny macOS Catalina
MovieMator manavao ny macOS Catalina ary mitondra fiasa vaovao
MovieMator, mpamoaka horonantsary faran'izay tsara miaraka amina fampiasa maro, no navaozina tamin'ny macOS Catalina mitondra fiasa vaovao
Ahoana ny fomba hitondrana maody maizina amin'ny tranonkala amin'ny Safari
Asehonay anao ny rindranasa roa izay hahatonga ireo tranonkala vangianao amin'ny Safari hifanaraka amin'ny Night Mode, toy ny sisa amin'ny rafitra.
Fantastical 2 ho an'ny macOS izao miaraka amin'ny fihenam-bidy 20%
Fantastical 2 dia miaraka amina fihenam-bidy 20% ao amin'ny Mac App Store, ka tsy tokony halainao io fotoana io
Animatrice, iray amin'ireo App GIF tsara indrindra, fanavaozana ny macOS Catalina
Iray amin'ireo rindranasa feno indrindra raha ny amin'ny famoronana GIF dia ny Animatrice, izay mifanaraka amin'ny macOS Catalina ankehitriny manampy fiasa vaovao
Kiwi ho an'ny Gmail maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra
Raha mitady mpanjifa mailaka ho an'ny Gmail ianao dia tokony hanandrana an'i Kiwi ho an'ny Gmail, fa efa azo alaina maimaimpoana izao.
Pixelmator Pro misy fihenam-bidy 25% hankalazana ny Zoma Mainty
Azonao antoka fa voamarikao fa ny Black Friday dia nanomboka tamin'ny fankalazana andro iray, hatramin'ny fananana ...
Modely 160 PowerPoint ho an'ny 3,49 euro ihany
Ny Templates ho an'ny fampiharana MS PowerPoint dia manome antsika modely isan-karazany amin'ny 3,49 euro ihany.
Esory ny angona EXIF ​​rehetra amin'ny sarinao miaraka amin'ity rindrambaiko ity
Ny fanesorana izay tahirin-kevitra EXIF ​​avy amin'ny sarinay dia dingana iray tena haingana sy mora miaraka amin'ny fampiharana EXIF ​​Clenaer Pro
Episodes Vaovao misy ny See, The Show maraina ary ho an'ny olombelona rehetra amin'ny Apple TV +
Ny fizarana fahefatra amin'ny andiany See, The Morning Show ary For All Humanity dia azo alaina ao amin'ny serivisy streaming video an'i Apple.
Miova eo anelanelan'ny endrika video miaraka amin'ny Converter Converter Mp4
MP4 Converter dia iray amin'ireo rindranasa feno indrindra ahafahana manova ny endrika video samy hafa maimaimpoana.
Fampiharana hanokafana rakitra .CBR
Raha mitady rindranasa hankafizanao ny tantara an-tsary ankafizinao amin'ny Mac ianao, amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao izay 3 tsara indrindra amin'ny macOS.
Avadiho ny rakitra MKV ho MP4 miaraka amin'ny fampiharana MKV2ATV maimaim-poana
Taona vitsivitsy lasa izay, samy nanohana endrika fisie horonan-tsary tokana ny iOS sy ny Apple TV. Fa…
DuckDuckGo Privacy Essentials dia manana extension ho an'ny Mac indray
Misy indray ny fanitarana ilay mpanakan-dàlana malaza DuckDuckGo Privacy Essentials. Azo alaina apetraka amin'ny Mac-nao izao
PDF Plus, tsy misy afa-tsy 1 euro mandritra ny fotoana voafetra
Rehefa miasa miaraka amina rakitra amin'ny endrika PDF, na ao anatiny na ivelan'ny Mac App Store dia ananantsika ...
Apple dia mandà ny fampiharana avy amin'ny Mac App Store izay nampiasa Electron
Ny dingam-pandinihana mandeha ho azy an'ny Mac App Store dia nanavao ny torolàlana ary nanomboka nandà ny fampiharana noforonina tamin'ny rafitra Electron
1Blocker dia mandray an'i macOS Catalina
Iray amin'ireo mpamadika doka tsara indrindra amin'ny Mac, 1Blocker, no nohavaozina tamin'ny tontolo macOS Catalina vaovao misy fampiasa vaovao.
Mamorona endrika 3D mora amin'ny Verto Studio 3D
Verto Studio 3D dia fampiharana modely 3D izay ahafahantsika mamorona karazana zavatra haingana, mora sy tsotra.
ToothFairy ho an'ny Mac, navaozina mba hifanaraka amin'ny AirPods Pro
ToothFairy, ilay rindranasa izay mitondra ny fitaovana Bluetooth any amin'ny avo kokoa, dia havaozina mba hifanaraka amin'ny AirPods Pro
Ny fanavaozana ny Twitter dia ho tsara kokoa amin'ny Macs-nay
Ireo tompon'andraikitra amin'ny Twitter dia namoaka fanavaozana manan-danja ho an'ny rindranasa ampiasain'ny Macs, mampiditra hitsin-dàlana fitendry maromaro.
Ovay haingana ny layout anao amin'ny Keyboard Pilot
Ny fanovana ny fisehon'ny fitendry ao amin'ny Mac antsika dia asa tena tsotra noho ny fampiharana Keyboard Pilot.
Zavatra 3 ho an'ny Mac miaraka amin'ny fihenam-bidy 30%
Araraoty ity tolotra Things 3 ity, izay lany andro afaka andro vitsivitsy, hahazoana iray amin'ireo mpitantana asa tsara indrindra amin'ny Mac App Store.
xPlan: fitaovana mahafinaritra hitantanana ireo tetikasanao
Raha mitady rindranasa hamoronana tetikasanao ianao, xPlan dia fitaovana tena tsara tokony hoheverinao raha mitady fampiharana manokana ianao.
Kafeinina, safidy tsara indrindra amin'ny Amphetamine
Raha toa ka tsy manolotra anao izay tadiavinao ny fampiharana Amphetamine, dia azo inoana fa manao izany ny kafe, na dia karama aza ity farany.
Dark Reader ho an'ny Safari dia manolo ny fotsy fotsy amin'ny Internet
Misaotra ny Dark Reader ho an'ny fanitarana Safari, azonay atao ny manolo ny faran'ny fotsy amin'ny tranonkala amin'ny mainty, fiasa mety raha mampiasa maody maizin'ny macOS ianao.
Ny fampiharana Twitter dia hita ao amin'ny macOS Catalina ankehitriny noho Catalyst
Ny fampiharana Twitter dia hita ao amin'ny macOS Catalina ankehitriny noho Catalyst. Ny fampiharana dia mitovy amin'ny iPad ary azo alamina.
Pixelmator Pro dia tsara kokoa amin'ny macOS Catalina sy amin'ny Mac Pro
Vaovao farany Pixelmator Pro, satria ny dikan-teny 1.5 dia feno vaovao tena mandaitra ary miaraka amin'ny SideCar dia handray andraikitra haingana amin'ny asanao ianao.
iMovie dia havaozina amin'ny kinova 10.1.13 miaraka amin'ny fanovana vitsivitsy
Apple dia namoaka kinova vaovao an'ny iMovie izay manampy fiovana vitsivitsy amin'ny filaminana sy ny fifanarahana ary manamboatra olana amin'ny iPhone XS Max
Final Cut Pro X dia havaozina amin'ny Display Pro XDR ary fanatsarana ny Mac Pro ho avy
Final Cut Pro X dia havaozina amin'ny Display Pro XDR ary fanatsarana ny Mac Pro ho avy. Manatsara ny fanodinana ity kinova vaovao ity noho ny Metal
Miomàna ho an'ny macOS Catalina miaraka amin'i Cisdem Duplicate Finder
Raha te hanana Mac anao ianao amin'ny toe-javatra magazay tonga lafatra ho an'ny MacOS Catalina, andramo ny Cisdem Duplicate Finder hanafoana ireo rakitra duplicate
Apple Arcade dia azo alaina ho an'ny Mac ao amin'ny macOS Catalina Golden Master beta
Apple Arcade dia azo alaina ho an'ny Mac ao amin'ny macOS Catalina Golden Master beta. Ho hita amin'ny Oktobra ity ny kinova farany.
Tantano haingana ny sarinao miaraka amin'ny ImageSize, tsy misy afa-tsy 1 euro
ImageSize dia mamela antsika hitantana haingana ny tranomboky sary misy antsika ary mandritra ny fotoana voafetra dia afaka mahazo azy amin'ny 1 euro fotsiny isika.
Tantano maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ny teny miafinao amin'ny Password Factory
Tantano maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra ny teny miafinao amin'ny Password Factory. Ny rindranasa dia manana kinova ho an'ny iOS ary ampitahain'ny iCloud.
Fantaro haingana ny momba ny fifandraisana amin'ny Internet amin'ity fampiharana ity
Noho ny fampiharana Internet Status, afaka fantatsika amin'ny fotoana rehetra raha manana olana ny fifandraisantsika amin'ny Internet ankoatry ny angona rehetra mifandraika amin'izany.
FileZilla Pro ho an'ny macOS dia mahazo fanatsarana lehibe ary mifamadika amin'ny maodelin'ny famandrihana
FileZilla Pro ho an'ny macOS dia mahazo fanatsarana lehibe ary mifamadika amin'ny maodelin'ny famandrihana € 9,99 isan-taona mandritra ny 7 andro hitsapana ny serivisy
Amboary amin'ny fihenam-bidy 50% ho an'ny Pixelmator Pro avy amin'ny Pixelmator
Amboary amin'ny fihenam-bidy 50% ho an'ny Pixelmator Pro avy amin'ny Pixelmator. Mba hanaovana izany, midira amin'ny Bundle of applications ao amin'ny Mac App Store.
Fafao, ovao na soloo ny PhotoScissors, ny sarin'ny sarinao, amin'ny euro 1 fotsiny
Ho an'ny euro 1 fotsiny dia afaka mahazo ny application PhotoScissors isika ary manapaka, manova na manafoana ny mombamomba ireo sary ankafizinay.
Araho maso ny Mac misy anao amin'ny StatsWidget Plus mandritra ny fotoana voafetra
Araho maso ny Mac misy anao amin'ny StatsWidget Plus mandritra ny fotoana voafetra. Fehezo ny Mac anao amin'ny fampiharana na ny Notification Center.
Telegram Desktop dia efa mamela antsika handahatra ny fandefasana hafatra
Ny kinova Mac an'ny Telegram dia nohavaozina mba hanampiana ny fiasa vaovao an'ny kinova iOS izay mamela antsika handahatra ny fandefasana hafatra.
Avadiho haingana ireo rakitra PSD ho JPG miaraka amin'ity rindrambaiko ity
Raha te hanova sary avy amin'ny PSD ka hatramin'n